Istaraatiijiyadda Paroli - UK 2021 ✅
Home » Ciyaaraha Casino » Roulette » Istaraatiijiyadda Paroli
Muxuu Cayaaryahan Kasta Ka Ogaanayaa Istaraatiijiyadda Paroli?
Waa tan sida aad ugu ciyaari karto Paroli-ka
Maxay yihiin Faa’iidooyinka iyo Qasaarooyinka Nidaamka Paroli ee Roulette?
Inta badan istaraatijiyadaha roulette ee ay shaqaaleeyaan ciyaartoydu waxay diiradda saaraan taxanaha guusha halkii ay ka soo kaban lahaayeen khasaarooyinka. Tani waa sida saxda ah ee qofku ka filan karo istiraatiijiyadaha caanka ah ee Martingale iyo Fibonacci kuwaas oo u shaqeeya ciyaartoy aan caadi aheyn oo halista ka leexanaya. Laakiin waxaa jira istiraatiijiyad kale oo qaadeysa qaab geesinimo leh oo xiiso leh oo ku wajahan guusha roulette – Istaraatiijiyadda Paroli.
Sida laga soo xigtay ilo badan, istiraatiijiyadda waxaa loo aaneeyey hal qof oo loo yaqaan ‘Paroli’, tanina waxaa markii ugu horreysay la adeegsaday 17-kii th qarnigii. Markii hore, tan waxaa markii ugu horreysay loo adeegsaday ciyaarta kaarka ee loo yaqaan ‘Basset’ oo caan ka ahayd Talyaaniga. Istaraatiijiyaddu waxay ku saleysan tahay mabda’a ah in khasaaruhu iyo guuleysigu had iyo jeer ku yimaadaan taxane. Tani waxay ka dhigan tahay inay jiri doonaan waqtiyo marka miiska casino uu ‘kulul yahay’ kaas oo deeqsinimo leh marka la bixinayo guuleysiyada, mararka qaarkoodna naadirku waa dhif, ‘qabow’. Istaraatiijiyadda Paroli, waxaad si fudud u jujuubtaa lacag badan marka miiska uu kujiro qulqulo kulul oo aad xaddiddo sharadka marka qabowgu jiro.
Waa mid ka mid ah xeeladaha ugu fudud ee lagu qaato istiraatiijiyadda roulette-ka waxayna u baahan tahay in lacagta lagu dhejiyo beddelka sharadka sida mid aan caadi aheyn / xitaa iyo casaan / madow. Si aad u bilawdo, waxaad marka hore u baahan tahay inaad aqoonsato saamiga aasaasiga ah ee aad rabto inaad ku ciyaarto. Haddii had iyo jeer lagaa badiyo miiska roulette, sharadkaaga guuleysanayaa waa inuu u dhigmaa saamigaaga aasaasiga ah ee aad doorbideyso.
Laakiin haddii aad ku guuleysatay ciyaarta, istiraatiijiyaddu waxay ku baaqeysaa in labanlaabo saamigaaga illaa heer aad u baahatid inaad dib ugu laabato saamigaagii hore iyo kan aasaasiga ah xitaa haddii aad weli ku jirto xiriir guul ah. Daqiiqadaas marka aad dib ugu laabanto xayeysiintaada aasaasiga ah waxay ugu dambeyntii kuxirantahay doorbidka ciyaaryahanka.
Waa tan tusaale aasaasi ah oo si wanaagsan loogu fahmi karo Paroli ee loogu talagalay roulette. Dheh tusaale ahaan waxaad go’aansatay 1 cutub oo sharad ah oo ah saamigaaga aasaasiga ah. Haddii aad ciyaareyso sharadkan oo aad lumisay, qadka xiga waa inuu labalaabaa sharadka hore (2 cutubyo sharad). Haddii ciyaarta soo socota aad mar kale guuleysato, nidaamka Paroli wuxuu soo jeedinayaa inaad u baahan tahay inaad labalaabto sharad markale (4 cutub oo sharad).
Tusaalaha kore, sidee ku go’aamin doontaa inay tahay waqtigii la joojin lahaa oo dib loogu laaban lahaa saamiga salka xitaa haddii aad wali guuleysato? Haddii aad si guul leh u labalaabtay sharadkaaga laba jeer, markaa taasi waa wakhti ku habboon inaad joojiso oo aad dib ugu laabato halbeegga sharadka. Dabcan, nidaamka Paroli waa mid aad u jilicsan, mar walbana waad kordhin kartaa khamaarkaaga xitaa haddii aad labalaabtay saamiga in kabadan laba jeer.
Nidaamka Paroli, bankroll-kaaga ayaa dhab ahaantii laga ilaaliyaa qulqulatooyinka luminta khatarta ah. Halkan, ciyaartoydu ma dhigi doonaan khamaaris ka sarreeya 4 jeer saamiga saldhigga la doorbido. Marka la soo koobo, ciyaartoydu halis uma gelin doonaan lacag kaliya jarista iyo soo kabashada khasaaraha. Dhibaatada istiraatiijiyaddani waa in markaad labalaabto saamiga, waxaa sidoo kale jira halista ah in jabka iskuulka la jebiyo. Ciyaartoydu ma filan karaan guul sare marka ay ciyaarayaan nidaamka Paroli ee loogu talagalay roulette.
Istaraatiijiyadda Paroli waa qaab sharad caan ah oo loo isticmaalo marka la ciyaarayo roulette
Nidaamkan sharadka waxaa loo yaqaan ‘Martingale’ oo gadaal loo rogay, halkaasoo ciyaartoydu diiradda saaraan guulaha isku xigxiga halkii ay si fudud u ceyrsan lahaayeen khasaaraha
Habkani wuxuu ku saleysan yahay mabda’a ah in miisaska roulette ay leeyihiin xarrago kulul iyo qabow. Ciyaartoydu waxay u baahan yihiin inay wax badan sharad ku galaan miisaska kulul isla markaana ay xaddidaan gambashada miisaska aan wax badan bixin xilligan
Paroli-ka, ciyaartooydu waa inay marka hore aqoonsadaan saamiga aasaasiga ah oo ay u adeegsadaan inay ku ciyaaraan ciyaarta ugu horreysa. Markay ciyaartoydu lumiyaan, waa inay sharad ku yeeshaan saamiga aasaasiga ah iyo markay guuleystaan, saamiga ugu dambeeya waa in la labanlaabaa